Labo Senator ka tirsan Aqalka Sare oo laga reebay diyaarad u socotay Kismaayo - Jowhar Somali Leader
Home Somali Labo Senator ka tirsan Aqalka Sare oo laga reebay diyaarad u socotay...
Labo Senator ka tirsan Aqalka Sare oo laga reebay diyaarad u socotay Kismaayo
Senator C/llaahi Sheekh Ismaaciil iyo Senator Iftin Xasan Baasto ayaa maanta laga reebay diyaarad u socotay magaalada Kismaayo, iyagoo ka mid ahaa Mas’uuliyiin ka qeyb geli lahaa Aaska Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo maanta lagu aasay Kismaayo.
Senator C/llaahi Sheekh Ismaaciil ayaa sheegay in saaka markii ay tageen Garoonka diyaaradaha, oo ay koreen diyaaraddii labaad ee meydka galbin laheyd in amar lagu siiyay duuliyaha diyaarada in rakaabka soo degaan.
“Waxaa dhacday markii aan garoonka tagnay ee diyaaradii nala saaray inuu sarkaal Nabadsugid ah amar ku siiyey duuliyaha diyaaradda inuu damiyo, dadka saaranna ay kasoo degaan”ayuu yiri Senator Fartaag.
Sidoo kale Senatarka ayaa sheegay in markii diyaarada ka soo dageen ay cadaatay sababta loo hor istaagay diyaaradda ay aheyd in isaga iyo Iftin Xasan Baasto laga reebo oo aanay raaci karin diyaaradda.
Waxaa uu sheegay in amarkaas ay bixiyeen Taliska Nabadsugida iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada, isagoo nasiib darro ku tilmaamay in dowladda ku mashquusho in Siyaasi mucaarad ah laga reebo aas uu ka qeyb geli lahaa.
Dhinaca lale Sentor Iftin Xasan Baasto ayaa ku eedeeyay in Taliyaha NISA iyo Mas’uuliyiinta ay is hortaagaan aas ay ka qeyb geli lahaayeen, usla markaana loo xanibay dartood diyaaraddii ay raaci lahaayeen.